MIYUU SUURTAGAL AH IN LA MAYDHO KAROOTADA KA HOR INTA AANAD KU RIDIN KAYDINTA MAQSIN, KA DIB GOOSASHADA, WAA LAGAMA MAARMAAN IYO WAA MAXAY SIYAABAHA LOO DHIGI KARO MUDDO DHEER - KHUDRADDA
Karootada waa mid ka mid ah khudradda ugu caansan ee miiska. Waxaa ku jira fitamiino badan, macdan iyo antioxidants. Si looga faa'iidaysto karootada, ma aha oo keliya xagaaga, laakiin sidoo kale xilliga qaboobaha, waxaa lagu kaydiyaa kaydinta. Kaydinta dabacasaha xilliga jiilaalka aad ayey uga adag tahay khudaarta cagaaran.
Sidaa darteed, ka feker qorshaha hore, guga, markaad dooranaysid abuurka ku haboon beeritaanka. Waxaa jira waqti hore-Bisaylkiisa, dhexe-Bisaylkiisa iyo karootada goor dambe-Bisaylkiisa. Hore u bislaanshaha ma aha mid ku habboon kaydinta. Mirahaasi waxay leeyihiin qaab gaaban, oo la isku dhajiyey (karootiga Paris), difaac yar oo cudurro ah waxayna ka sii darayaan meesha ugu horeysa.
Sidaa darteed, haddii soo iibsiga kaydka ee jiilaalka ayaa la qorsheeyey, mudnaanta waxaa la siiyaa noocyo dabayaaqadii-Bisaylkiisa leh caadada caadada ah ee 120-140 maalmood iyo qaar ka mid ah noocyada dhexe ee Bisaylkiisa leh muddo ah 100-120 maalmood.
Waxay leeyihiin miro khafiif ah oo ku haboon oo leh tayada ilaalinta fiican.
Noocyada dabacsan ee-Bisaylkiisa ayaa ugu fiican ee lagu keydiyo jiilaalka:
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan noocyada nooca ugu wanaagsan ee loogu talagalay kaydinta waxaa laga heli karaa maqaalkeena.
Joogitaanka noocyo kala duwan oo ah hannaanka sida tayada ilaalinta ma xaqiijineyso in beergooyinku si guul leh loo ilaalin doono.
Dareen u yeelo! Halabuurka ciidda, qadarka roobabka xagaaga, cayayaanka iyo goosashada goor hore ama goor dambe waxay si aad ah u saameeyaan badbaadada dalagyada xididada jiilaalka iyo nolosha shelf.
Miyaan u baahanahay inaan sidan sameeyo ka dib beergooyska ama maya?
Inta badan dukaamada aynu ku aragno maydheen, karootada qoyan ee dhalaalaya oo u dhow, sida haddii si tartiib tartiib ah uga soo kicisay sariir la xayirmay dhulka. Karootada iftiin leh waxay u muuqataa mid soo jiidasho leh. Waxaa la dhaqaa marxaladda diyaarinta si ay u bixiso bandhigga ugu wanaagsan.
Waxaa jira fikrad xoog leh oo dabacasaha aan la dhaqin ka hor inta aan la dhigin jiilaalka. Waad yareyn kartaa oo keliya wax yar oo dhul ah oo aad ku kaydsan tahay kaydka sida ay tahay. Karootada la dhaqay si dhakhso ah ayey u foorarsadaan oo ma adkeysan karaan kaydinta dheer.
Laakiin waqti isku mid ah, roogagga dukaamada, waxaan ku aragnaa dabacasaha maydhay oo aan weli la dhaqin. Aan aragno. Si aad u dhaqdo ama aadan u dhaqin dabacasaha ka hor inta aanad jiifin?
Waxaa jira taageerayaal lagu kariyo karootada ka hor inta aan la dhigin kaydinta jiilaalka. Waxay soo gudbiyeen doodaha soo socda:
Marka la dhaqo, maqaarka maqaarka ama meelaha ay saameeyeen kalluunka waxaa lagu heli karaa qarsoodi adoo hoos u dhigaya xayawaanka dhulka.
Haddii ciidda lagu daaweeyo kiimikada xilliga kuleylka, iyo xagaaga ayaa ahaa qalalan, kiimikada hadhay waxay ku jiri kartaa dhulka waxayna gashaa dalagga xididka inta lagu jiro kaydinta.
Cudurrada cudurada ee ku jira ciidda ayaa geli kara maqaarka uurjiifka waana sababaha cudur iyo gooyo. Marka la dhaqayo khatartaan waxaa loola yaraada eber.
Inta lagu jiro kaydinta, waxaa lagu talinayaa in si joogta ah loo kala sooco dalagyada xididka ah si loo ogaado tijaabooyinka laga bilaabo inay sii xumaadaan.
Qoraalka. Haddii karootada la dhaqo, way sahlan tahay in la ogaado midhaha jirran oo looga hortago in la garaaco inta kale.
Dhibaatooyinka waaweyn ee ugu weyni waa kaliya ee ku adkaata nidaamka:
Iyada oo mugga ballaaran ee dalagga koray, waa wax aad u adag in la mayrayo karooto kasta oo si fiican. Waa lagama maarmaan in la dhaqo biyo socda. Dhamaan sirqo kasta oo guriga ah ma laha fursadan. Waa inaanu bixinnaa qadar badan oo biyo ah si loo isticmaalo tayo fiican ee khudaarta.
Just carrots ka soo baxay dhulka waa in la qalajiyaa. Waxay qaadataa 2-3 saacadood. Haddii ay qoyaan inta lagu dhaqayo, ka dibna waqtiga qalajinta ayaa looga baahan yahay wax badan.
Si loo keydiyo karootada dhaqday, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo diyaariyo dhismaha, sanduuqyada, dambiilaha ama bacaha. Karootada la dhaqay waa inaysan ku jirin taabasho aan la dhaq-dhaqaaqin, haddii kale waxaa laga ilaalin doonaa jirrada.
Ma lagama maarmaan in la dhigo Maqsin?
Haddii mulkiilaha gaarka ah ama beeruhu uu heshiis la galo dukaamada ama makhaayadaha si loogu helo qudaar cusub, ka dibna karootiga waa inuu leeyahay bandhig soo jiidasho leh. Kadibna khudaarta waa in la dhaqaa kahor intaan la dhigin.
Haddii tani ayan dhicin xilliga dayrta, xilliga dayrta, markaa waxay noqon doontaa mid aan suurtagal ahayn in la dhaqo qadar badan oo dalagyo xidid ah xilliga jiilaalka, biyo socda, ka dibna qallaji ka hor intaan la keenin.
Qaybta hoose ama maqaasiinka waa meel fiican oo lagu kaydiyo khudaar kastoo khaas ah. Dabacasaha la dhaqay iyo kuwa aan la dhaqin ayaa si wanaagsan loogu hayaa miiska (macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaydinta karootada Maqsinka, halkan fiiri).
Waa muhiim! Ka hor inta aan la dhigin dhagxaantu derbiyada lagu maydho qolka, weelasha, sanduuqyada caagagga ah iyo kuwa alwaaxda ah, dambiilaha iyo foosto ee khudradda la keydiyay waa in lagu baari karaa lime ama sulphate copper.
Ka hor inta aanad dhicin Beerta qaar ka mid ah door bidayso in la gooyo oo kaliya dabada, laakiin sidoo kale dameerka, sidaa daraadeed in dabacasaha ma Gagaashid oo aan ka lumin tayada faa'iido leh (macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo goyn karo karootiga loogu talagalay kaydinta jiilaalka, waxaad ka heli kartaa halkan).
Ka goynta ka dib, karootada waxaa lagu gooyaa ash alwaax ah meel goynta ah.
Si looga ilaaliyo kallana caddaan iyo cayayaanka, diyaariso xal of daloolka potassium iyo karooti biyaha ku dhex mari 2 saacadood. Ka dib markii ay qallajiyaan oo ay samaystaan ​​xariiq.
Karootada waxaa lagu dhaqaa biyo qabow ka hor inta aan la kaydin. Haddii aysan jirin biyo socda, samee isbeddello badan oo biyo ah. Marka nadiifinta lagu fuliyo cimilada roobka leh iyo qaybo waaweyn oo wasakh ah waa la xoqay, biyaha waa in la bedelaa marar badan. Badanaa 3 isbeddel waa ku filan.
Khudaarta waxaa lagu dhaqaa gacmo gashi. Si tartiib ah uga saar jajabyada waaweyn ee adduunka oo isku dayaya inayan waxyeeleynin maqaarka. Biyaha labaad iyo seddexaad, dabacasaha waa la nadiifiyey, markaad si taxadar leh u kormeereysid oo aad u jeexjeexdo xididdo ama jirro.
Haddii khudaarta cagaarka lagu koro ciid adag, waxaad ku nadiifin kartaa burush jilicsan.
Ka hor inta aanad karootada si fiican u qalajin. Qalitaanka waxaa lagu sameeyaa dusha sare ee dabool leh, meel fiican oo hawo leh.
Xaaladna ma jiri karto karootada qorraxda. Laga soo bilaabo daqiiqad goosashada illaa xilliga gaabinta, heerkulka dabacasaha waa inuu si tartiib tartiib ah u yaraada ilaa uu gaaro + 2C.
Haddii tirada karootada ay yar tahay, ka dibna waxaa habboon in lagu kaydiyo bacaha balaastigga ah. U qaado baakado khaas ah oo loogu talagalay qaboojinta, dabacasaha dabka ku dhex jira oo ku cadaadi hawada abuuraysa faaruqin. Laga soo bilaabo bacaha waaweyn waxaad hawada ku shubi kartaa hawo nadiif ah. Bacda ayaa markaa si adag loo xirxiraa oo loo kaydiyaa. Waxaad ku keydsan kartaa qaboojiyaha iyo barafeeyaha, balakoonka, qolka hoose, Maqsin. Haddii aan la helin hawo, dalagyada xididku ma dhicin waqti dheer
In diirka ee basasha iyo toon. Sanduuq ayaa ku dhexjiray layers of diirka basasha iyo dabacasaha. Kaydiyaa ilaa goosashada xigta iyada oo aan lumin nafaqooyinka.
In balka baaxad weyn. Just sida diirka basasha, dabacasaha waxaa lagu shubay geed ama chips firirka. Phytoncides oo ku jira jajabyo waaweyn ma u oggolaan khudradda in ay qalalaan oo kallanaato
Qoraalka. Iyadoo mid kasta oo ka mid ah hababka kaydinta, xididdadu waxay ahaanayaan nadiif, cusub oo diyaar u ah inay cunaan.
Ku dhaq dabacasaha waxaa lagu kaydin karaa qol diirran ama diirimaad miis aan lahayn maqaasiinka. Sida weel, waxaad isticmaali kartaa dhalooyinka ama shabaggaa khudaarta cagaaran oo qalaji.
Karootada xilliga jiilaalka. Gaaritaanka iyo kaydinta:
In ciidda. Karootada waxaa lagu kaydiyaa qummanaanta loamy qoyan ee sanduuqyada. Caanaha ayaa ilaaliya heerkulka kaydinta joogtada ah mana u ogalaan bakteeriyada inay faafto.
In qolof dhoobo ah. Dalag kasta oo rooti ah ayaa lagu rusheeyaa dhoobo dareere ah, la qalajiyey oo loo kaydiyey kaydinta sanduuqyada.
Bacaha boodhka furan. Bacaha dabacasaha (5-30 kg) ayaa loo hayaa u furan uumiga CO2. Kondensate ka ah derbiyada boorsooyinka ayaa u dhex socda godadka ka samaysan hoose ee boorsada.
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Moss sida fiilo.
Kaydinta dabacasaha aan loo baahnayn:
Raadi meel meel ku haboon iyo siyaabo lagu keydiyo karootada xilliga jiilaalka? Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso maqaalkan soo socda:
Sida loo badbaadiyo dabacasaha haddii aysan jirin maqnaansho
Kaydinta khudaarta cagaaran ee bangiyada iyo sanduuqyada.
Sida loo ilaaliyo khudaarta qaboojiyaha?
Kaydinta karootada xilliga qaboobaha ee dhulka.
Sidee loo xafidaa khudradda balakoonka xilliga jiilaalka?
Sidee loo ilaaliyaa karootada ilaa jiilaalka cusub?
Inkasta oo ra'yiga beeralayda dharka dabacasaha ay waxyeello u geystaan ​​kaydinta dheer, farsamadu waxay muujinaysaa in si habboon loo ilaaliyo xeerarka diyaarinta, kaydinta iyo kaydinta, waxaa loo nadiifin karaa wakhti dheer iyadoo aan lumin hantida qiimaha leh iyo bandhigid.
Waxaan sidoo kale u soo jeedinaynaa maqaalo waxtar leh oo ku saabsan sida loo keydiyo karootada xaq on sariirta beerta, dhulka iyo sida loo keydiyo karootada iyadoo ay weheliyaan xididdo.